Vagari vemuBulawayo Vokurudzira Kanzuru Kushandisa Mukana Wekuve Special Economic Zone
UMayor wakoBulawayo uMnu. Martin moyo
Izvi ndezvimwe zvabuda pamusangano waitwa pakati pevagari pamwe nekanzuru muBulawayo apo kanzuru yange ichiparura chikamu chechipiri chechirongwa chekuvandudza mabasa akasiyana-siyana anoitwa nekanzuru icho chinoziikanwa kunzi Rapid Results Approach Initiative.
Sachigaro weBulawayo United Residents Association, VaWinos Dube, vati kanzuru inofanirwa kuita kuti vanoda kusima mari muguta iri vakwanise kuita izvi zviri nyore.
Izvi zvatsigirwawo naVaPercy Mcijo vanove mukuru mukuru wesangano reStreetwise Informal Traders Association, avo vatiwo zvakakosha kuti kanzuru ishandise mukana wekuti guta reBulawayo nderimwe renzvimbo dzakanzi maSpecial Economic Zone ari munyika kuti ibatsire kumutsurudza makambani akavhara muguta iri.
Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti Amai Siziba vati kanzuru inorasikirwa neimwe mari yainofanirwa kuwana nekuti haizi kushandisa nzvimbo dzakadai sema hall ekanzuru.
Vati kanzuru inofanirwa kugadziridza nzvimbo dzakadaro uye kukoshesa kugadziridza migwagwa, kunyanya munzvimbo dzinogara veruzhinji, vachiti vakaremara kunyanya vechikoro vanofamba nema wheelchair, vanotadza kufamba zvakanaka nekuda kwekuti migwagwa mizhinji ine makomba-makomba.
Chirongwa cheRapid Results Approach chinotarisa zvikamu zvakasiyana-siyana zvinofanirwa kukosheswa nekanzuru mumabasa ayo ainoitira vagari, kusanganisira kuvawanisa mvura yekunwa yakachena, kutakura marara nekuchenesa nharaunda, pamwe nekugadzira migwagwa.
Mukuru wezvemari mukanzuru yeBulawayo, VaKimpton Ndimande, vaudza musangano uyu kuti vagari vane zvikwereti zvinodarika zana nemakumi manomwe emamiriyoni emadhora, zvisinei kuti hurumende yakambobvisira vagari vose munyika zvikwereti zvavo zvose kumakanzuru mugore ra2013.
Vati kunyange hazvo kanzuru ichiziva kuti vanhu vakawanda vari kuomerwa nehupenyu, zvakakosha kuti vagari vabhadhare zvikwereti zvavo kukanzuru kuti igokwanisa kuita mabasa ainofanirwa kuita nemazvo.
Meya weguta reBulawayo, VaMartin Moyo, vati chirongwa cheRapid Results Approach, icho chakatanga kushandiswa muna Gumiguru gore rakapera, chiri kuenderanawo nechirongwa chehurumende chekutarisa zvinenge zvakwaniswa kuitwa nemapazi ehurumende pamwe nemakanzuru mukati memazuva zana.
Vachipindura mubvunzo wekuti kanzuru yakagadzirira zvakadii pakudzivirira zvirwere zvakadai sekorera neTyphoid, VaMoyo vati chimwe chezvinhu zviri kukosheswa nekanzuru pachirongwa cheRapid Results Approach inyaya yekuwanisa vagari mvura yakachena uye hutsanana.
Vamwe vagari vange varipo vashora nyaya yekuti makanzura akawanda haana kuuya kuchiitiko ichi. Vati chirongwa cheRapid Results Approach chakakosha vachiti chinobatsira kuti kanzuru iwone painenge iri kusarira pamabasa ainotarisirwa kuitira vagari.
Chikamu chaparurwa ichi chakatanga musi wa 8 Ndira uye chichapera muna Kubvumbi apo kanzuru inotarisirwa kuzopira vagari zvainenge yakakwanisa kuita mukati menguva iyi uye kutangazve chimwe chikamu chechirongwa ichi.